Dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay Gobolka Sanaag – XAMAR POST
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal khasaaro geystay oo Ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland iyo Maleeshiyaad hubeysan ku dhexmaray deegaanka dararweyne oo hoosyimaada degmada Ceelaf-weyn ee Gobolka Sanaag.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Ciidamada Soomaaliland oo wada howlgal ay ku baadi goobayaan Nin ruux Shacab ahaa ku dilay deegaanka Ceel-Afweyn ay dagaal kala horyimaadeen maleeshiyad ku heyb ah Ninka wax dilay,waxaana dagaalka ku geeriyooday hal askari oo ka tirsan Ciidamada Soomaaliland.
Dad ku sugan deegaanka dararweyne ee lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka kadib Ciidamada Soomaaliland ay sii wateen howlgalkooda halka maleeshiyaadkii hubeysnaa ay goobta ka carareen.
Wararka aan saakay ka heleyno deegaanka dararweyne ee lagu dagaalamay ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Millateriga Soomaaliland ay halkaasi ku sugan yihiin,isla markaana weli howlgalka ay wadaan,hayeeshee aysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan Ninkii ay baadi goobayeen ee dilka geystay.
Dagaalka Maleeshiyaadka hubeysan iyo Ciidamada Soomaaliland ku dhexmaray deegaan ka tirsan gobolka Sool ayaa kusoo aadaya xilli Gobolkaas ay weli ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa Maamulada Puntland iyo Soomaaliland oo dhawaan dagaalamay.
Isbaheysi Siyaasadeed oo looga dhawaaqay Muqdisho